8 Qodob Ee Kaa Caawin Karta Maareeynta Xanaaqaada. | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Miski Cabdinuur Salal — July 26, 2019
Xanaaqa waxa uu kamid yahay dareemaha dabiiciga ah ee aadanaha ku abuuran sida:Farxadda, Naxdinta iyo Murugada. Xanaaqa waxaa uu keeni karaa kala fogaanshaha qaluubta Aadmiga,waxaa jirto oraah oranayso “Xanaaqu waa waali gaaban”. Mararka qaar in uu qofku xanaaqo waa ay wanaagsantahay,sidda marka uu cunuggaada qalad kaa galo oo aad rabtid in uu dareemo qaladkiisa. Kawaran haddii aad maalin waliba ka xanaaqdo waxyaabo si maalinle ah u dhoca sida in aad ka xanaaqdo dadka aad shaqo wadaagga tihiin, ama bulshada qeeybo heeda kala gadisan, Saameeyan intee la’eg ayuu xanaqa ku keeni karaa caafimaadkaada, sidoo kale sidee buu noqonanayaa xariirka kaa le dhaxeeyo bulshada. Markasta oo uu bato xanaaqaada waxaa hoos u dhac ku imaado Caafimaadkaada, sidoo kale waxaa hoos u dhac ku imaado xariirkii wanaagsanaa ee kale dhaxeeya bulshada.
Haddaba Kaallay Aan Isla Aragnee Siddeedda Qodob Oo Aad Ku Maareeyn Karto Xanaaaqaada.
Dhageeysiga Qur’aanka marka aad xanaaqsantahay, waxa uu ka qeeyb qaataa maareeynta xanaaaqa.
Waxaa wanaagsan in aad qorato mar walibo waxa kaa xanaajiyo, si aad uga fogaato xanaaqa.
Isla markii aad xanaaqdo ka dhaqaaq meesha aad joogtay sameeyna socod, waxa ay kaa caawineysaa in aad maareyso xanaaqada, sidoo kale waa in aad badashaa jawiga aad ku jirtay, sidda haddii aad fadhiday in aad istaagto. Socodka iyo orodka la sameeyo xilliga xanaaqa waxa ay yareyaan caburka qofka.
Sameynta iyo hagaajinta howlaha gurigaaga,waxa ay ka qeeyb qaadataa maareeynta xanaaqa.
Uqabo xanaaqaada waqti, waxaa laga yaabaa in aad layaabto qodobkaan laakiin waxaa xaqiiq ah haddii aad u qabto xanaaqaada waqti waxa aad dareemeysaa nafis(cabburki in uu kaayaraaday).
Waxaa kale oo wnaagsan in aad cunno adag ruugtid sida kaarootada, marka aad bilowdo ruugidda ama calalinta maskaxdaada waxaa ka yaraan doono cadaadiska badna ee xanaaqa kaaga imaankaro.
Markasto oo aad xanaaqdo waxaa wanaagsan in aad aaddo beeraha ama aad hor fadhiisato xeebta.
Xanaaqaada yuusan kuu horseedin bur-bur nololeed iyo mid nafeedba, waxaa xaqiiq ah in aad dib uga shallayn doonto qaladaadka adage e aad gasho adiga oo xanaaqsan
Bulshoweynta Soomaaliyeed waa dad aad uwanaagsan, lehna qalbi wanaagsan waxa aana ku bogaadinayaa in ey badiyaan cafiska iyo dhoolacaddeynta.
Tags: 8 Qodob Ee Kaa Caawin Karta Maareeynta Xanaaqaada:
Next post 10-ka Dhibaatooyin Ee Haysta Soomaaliya
Previous post Maxaa Suurra Geliya Raaxada Qofka?